Global Voices teny Malagasy » Fitsidihana Foibe Iray Fitsaboana Aretin-tsaina Ao Moskoa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Marsa 2017 18:14 GMT 1	 · Mpanoratra Kevin Rothrock Nandika miora
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Fahasalamàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona, Akon'ny RuNet
Vera Shengelia. Sary: Anna Shmitko / Facebook
Rosiana iray mpanao gazety i Vera Shengelia, mpikatroka mafana fo ho an'ny fahasalamana ara-tsaina, ary anisan’ny mpitantana ny Orina Life Route  ao Moskoa, izay manome fanampiana ireo tanora sy olon-dehibe manana fahasembanana. Efa an-taonany maro lasa izao no nilaza tamin’ny RuNet Echo i Shengelia fa misy tovolahy iray ampiany manokana, izay ny havany akaiky ihany no nampiditra ary nametraka ity tovolahy ity tao aminà foibe fitsaboana ny saina sy ny atidoha. Hatrizay dia fanaony ny mitsidika azy tany aminà toeram-pitsaboana iray ivelan’i Moskoa, nefa nafindra tany aminà toeram-pitsaboana ao an-tanàna ilay tovolahy, vao haingana izay.
Tamin’ny herinandro lasa teo dia hitan'i Shengelia tany amin'ny trano fonenany vaovao ity tovolahy ity, nanaitra azy ny toe-mpiainany tao. Tamin’ny 16 Martsa, novelabelariny tao amin’ny Facebook ny zavatra hitany, izay niteraka fizaràna maherin'ny 450 sy fihetsehampo ambonin'ny 1.700. Manolotra ity lahatsoratra manaraka ity ny RuNet Echo, izay nadika tamin’ny teny Malagasy.
Tsy voaisako intsony hoe impiry aho no nandray anjara tanatinà resaka sy fivoriana an-databatra boribory momba ny « Lehilahy Sovietika » izay iresahana ny fitsipika mamaritra ny kolontsainy, ny soatoaviny, sy izany rehetra izany. Androany anefa tao anatin’ny dimy minitra monja dia azoko daholo ny zavatra rehetra.
Nitsidika toeram-pikarakarana olon-dehibe aho — toeram-pitsaboana ny saina sy ny atidoha no fiantsoan-dry zareo azy.
Niakatra tany amin’ny rihana faharoa aho, ka nisy fofona nandona ahy. Trondro sy ovy no sakafo harivan-dry zareo. Raha mitady ny « fitsipika mamaritra ny kolotsaina Sovietika » ianao dia aza mitady lavitra mihoatra noho ny fahatairana aterak'io fofona io aminao.
Notriariko ny vozon'akanjoko raha tsy vitako ny nandao ilay toerana, ka niakatra rihana iray hafa indray aho. Nahita varavarana plastika nihidy mafy aho. Nisy varavarankely lavalava somary miendrika boribory teo amin’ilay varavarana, ary avy teo dia nisy olombelona mijery ahy, toy ny biby voahidy anaty fefy. Nisy lehilahy ampolony teo ho eo, nanao akanjo mitovy. Tsy nahavita nanondrika ny lohako ho mari-piarahabana akory aho.
Jesosy ô, vao ora roa tao alohan’izay aho no nanazava taminà efitrano iray feno mpianatra ny fotokevitra momba ny voninahitra, momba ny zon’olombelona, momba ny fototra ijoroan’ny fanaovan-gazety sosialy, momba ny fitoviana eo amin'ny firesahana, ary momba ny maha-olona hatrany ny olona iray na misy inona na inona. Izao, noho ny tahotra lehibe, ary noho ilay fofona trondro mahery, nanomboka nijery nanodidina ny efitrano aho raha nisy olona nanao aronakanjo fanao anaty laboratoara, nitady raha nisy mpanara-maso — n’iza n’iza afaka hiaro ahy.
Nitsidika tovolahy iray aho — tovolahy tsara fanahy, ankizy avy any ambanivohitra izay nianatra ny siansa pôlitika tany amin’ny Anjerimanontolom-panjakana tao Moskoa. Manamboatra solosaina izy, ary indraindray miresaka amin’ny namany amin’ny teny Anglisy. Vao avy nafindran’izy ireo taty izy. Tsy ho azoko an-tsaina mihitsy izany. Reraka izy. Niadana ny fihetsiny. Nangovitra ny feony, toy ny anatin'ny iray amin'ireny horonantsary mahatsiravina momba ny Gestapo ireny. Nividianako mofomamy izy, ary tsy vitany akory ny namaha ilay boaty irery.
Sary: InLiberty / Facebook
Ary avy ao anatin'ity lavaky ny famoizam-po ity, avy ao amin’ireo bodofotsiny matevina, no itenenany amiko, « Vera a, naleoko lavitra aho nalefan-dry zareo tany am-ponja fa ohatr’izay aho efa tafavoaka. » Hoy izy, « Tena nanao zavatra nahatezitra mafy an’Andriamanitra aho angamba raha ny eritreritro.»
Kanefa inona no nataony ka nahatezitra an’iza na iza? Ny fahafatesan’ny reniny ve? Sa ny nanarian’ireo sisa mba havany azy taty?
Indroa isan’andro dia entina mivoaka mba hifoka ry zareo, ka milahatra araka ny fitsipika. Nalain-dry zareo ny findainy. Amin’ny 6 ora hariva no misakafo. Amin'ny 6 ora hariva no lera fisakafoan'ny olon-dehibe. Dia tapitra hatreo ny tontolo andro. Karazana sazy ve izao? Karazana fonja ve izao ? Inona izao?
Teo ampivoahana, nifanena tamin’ny lefitry ny talen'ilay toeram-pitsaboana aho. Efa mifankahalala izahay. Hoy aho aminy : avereno amin’ilay tovolahy ny findainy. Vao tonga izy, tsy mahafantatra an’iza n’iza, ary matahotra. « Vera a, » hoy izy, « misy zavatra mampihorohoro mitranga rehefa manomboka manome fahafahana ianao.» Ny savorovoron-tsaina, ohatra.
Navelako teo ny mofomamy. Nividy kafe taminà milina mpamokatra iray aho ary nivoaka nifoaka sigara. Nony niverina aho, dia nanambara tamiko ilay tovolahy, izay tsy nahazo aina, fa tsy afaka makany amin’ny efitra fandroana ao amin’io toerana io akory izy: tsisy takona ao, mivelatra daholo ny rehetra, ary menatra izy.
Tsy atahorako ireo sembana na ireo manana kilema ara-tsaina. Fa atahorako ny fasisma, ary matahotra aho rehefa hidiana tahaka ireny biby fiompy ireny ny olona. Atahorako ny trondro endasinareo. Matahotra aho rehefa tsisy fetrany na farany ity tainareo ity.
Ity lahatsoratra ity dia nivoaka voalohany tamin’ny teny Rosiana tao amin'ny Facebook, nosoratan’i Vera Shengelia, mpanao gazety sady mpikatroka mafana fo ho an'ny fahasalamana ara-tsaina. Azonao jerena eto  ilay lahatsoratra niaingany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/03/24/97006/
 Orina Life Route: https://liferoute.org/
 novelabelariny : https://www.facebook.com/vera.shengelia/posts/1871300896229362